Ileta yengcebiso: yintoni, zeziphi iintlobo ezikhoyo kwaye zenziwa njani (Imizekelo) | Ezezimali
Encarni Arcoya | | ishishini
Xa ufaka isicelo somsebenzi omtsha, xa ufuna ukufaka isicelo semali-mboleko ebhankini, okanye nokuba uza kufunda into, ileta yengcebiso iba sisixhobo esiluncedo kakhulu esivulela iingcango kuwe nesenza ukuba abo benza udliwanondlebe bavuleke ngakumbi kuwe .
Kodwa, Yintoni ileta yengcebiso? Usebenzisela ntoni? Siza kukuxelela malunga nayo yonke le nto kunye nokunye okuninzi apha ngezantsi.
1 Yintoni ileta yengcebiso
2 Ukusetyenziswa kweeleta zengcebiso
2.1 Ileta yengcebiso yomsebenzi
2.2 Incwadi yokucebisa
2.3 Ileta yengcebiso ngezifundo
3 Yintoni oza nayo neleta yengcebiso
3.1 Indima efanelekileyo
3.3 Chonga umcebisi
3.4 Ixesha lobudlelwane
3.5 Isimo kunye nobungcali
3.6 Sisiphi isikhundla osibambileyo
3.7 Ingcebiso ibinzana
3.8 Idatha kunye notyikityo
4 Uyicela njani ileta yengcebiso
5 Imizekelo yeeleta zengcebiso
Yintoni ileta yengcebiso
Ileta yengcebiso inokuchazwa njenge uxwebhu apho umntu anikezela ngembalelwano ukuqinisekiswa kwexabiso lakho kunye / okanye ubungcali bakho ukuze ithathelwe ingqalelo kwiiprojekthi ezizayo, zombini kunye nomsebenzi.
Ngamanye amagama, sithetha ngesixhobo sakho apho umntu omnye "ecebisa" omnye, enika umbono wokuqala osekwe kubudlelwane obumanyanisayo bobabini.
Kuya kufuneka kubonise amandla, iimpawu, iimpawu, ulwazi kunye noqeqesho lomntu kwaye inike ixabiso kugqatso lwayo, nokuba kungomsebenzi, yibhanki, kuqeqesho ...
Ukusetyenziswa kweeleta zengcebiso
Ileta yengcebiso inokusetyenziswa okuninzi. Ngapha koko, zininzi iintlobo zamakhadi olu hlobo, nangona ezona zixhaphakileyo zezi:
Ileta yengcebiso yomsebenzi
Inxulunyaniswe nomsebenzi, kwaye kuyo a ingcebiso evela kwimisebenzi yangaphambili ukuze kubekho amathuba amaninzi kwiiprojekthi ezizayo.
Oku kusetyenziselwa izinto ezininzi, kuba inokusetyenziselwa zombini iibhanki (ukucela imali-mboleko, iikhredithi, iziqinisekiso ...) kunye nezikolo, ukwamkelwa kwabantwana ... Ngokubanzi, Iluncedo kuyo nayiphi na imeko ebuza ukuba kufanelekile ukuthatha umsebenzi othile. Yiyo loo nto zingabhalwa kungekuphela ziingcali (iinkampani apho usebenze khona) kodwa nangabamelwane, obaqhelileyo, oogqirha ... Nabani na okwaziyo ukuba angathetha kakuhle ngawe.
Ileta yengcebiso ngezifundo
Zisetyenziswa ikakhulu kwinqanaba leyunivesithi okanye izidanga eziphezulu (isidanga se-Master, iikhosi phesheya ...) apho kucetyiswa ukuba kwenziwe ezi ngcebiso wazi ukuba ngaba ufanelekile (okanye hayi) uqeqesho.
Nangona ingasetyenziswanga kakhulu eSpain, asinakuthetha okufanayo nakwamanye amazwe, apho, ukufikelela kuqeqesho oluthile, bafuna ukuba uhambe neengcebiso kwaye de kube kufundwe abasamkeli isicelo sakho.
Yintoni oza nayo neleta yengcebiso
Ngoku ukuba uyazi ukuba yintoni ileta yengcebiso, kunye nokusetyenziswa ongayinika, lixesha lokuba ungene nzulu kumxholo ekufuneka uwuphethe. Nangona kukho iintlobo ezahlukeneyo zezindululo, phantse zonke zinezinto ezifanayo, kwaye zezi:
Sukuya kuprinta kwaye ubonise ileta yengcebiso kwiphepha elincinci, ngaphandle kwesitampu senkampani, ngokungafaniyo nokujonga ngokungakhathali. Nokuba awuyithumeli eyintsusa (kuba kuya kufuneka uyigcine xa kunokwenzeka kuvela iimeko ezintsha), kuya kufuneka ukhathalele ukwenziwa kweleta.
Eyona nto ilungileyo yile Uyiprinte kwisiqwenga sephepha kunye nesitampu senkampani Kwaye, ukuba akukho nanye, ephepheni ubuncinci i-90 gram ubukhulu, ukuyenza ibe yinto enganyangekiyo kwaye ibe sesikweni ngakumbi.
Masiqale ngentloko. Ngaphandle kokuba kwaziwe ukuba ngubani oza kuyifumana le leta, kungcono ukuba ubhalele "Ngubani onokumxhalabisa" okanye "Mnumzana Ohloniphekileyo / As" ukugubungela iqela elibanzi. Awusoze wazi ukuba ngubani oza kuba nakho ukuyifunda kwaye ukuqala ileta yengcebiso engalunganga kunokukwenza ukuba ulahlekelwe yinto obufuna ukuyiphumeza nayo.
Oko kukuthi, kumntu obhala ileta kwaye ucebisa enye. Kodwa akwanelanga ukuthi "NdinguPepito Pérez", uyayidinga loo nto Faka igama lakho kunye nefani, i-imeyile okanye inombolo yomnxeba kwaye ukuba kunokwenzeka, kunye ne-ID yakho.
Ngale ndlela, nabani na ofumana ileta, ukuba bafuna ulwazi oluthe kratya malunga nawe, banokuqhagamshelana naye bambuze ngqo. Kwaye uya kuba nakho ukufumana ulwazi oluvela kuloo mcebisi ukuze ubone ukuba ngaba "ngumntu othembekileyo".
Nokuba yileta yomsebenzi, eyeyakho okanye eyokucebisa ngezifundo, ufuna olo xwebhu ukumisela uhlobo lolwalamano olukuqhagamsheleyo, kunye nexesha obukuloo lwalamano. Umzekelo, ukuba usebenze iminyaka eyi-X kwinkampani, ukuba ubunabahlobo kwiminyaka eyi-X okanye njengabalingane bakho, njl.
Isimo kunye nobungcali
Kule meko sibhekisa kwi indlela yokuba ngumntu esincomela kuye. Ngamanye amagama, thetha malunga nezimo zengqondo onazo (ezingekho ngaphezulu kwesithathu) kunye nezinto oziphawulayo emsebenzini wakho (hayi ngaphezulu kwe-3).
Sisiphi isikhundla osibambileyo
Kwimeko apho ileta yengcebiso yomsebenzi, okanye ukuba ulwalamano onalo lolomsebenzi, ngekhe kube buhlungu ukubeka uhlobo lwesikhundla esele senziwe, kunye nenkcazo yemisebenzi.
Ukuba yileta eyunivesithi, isidanga senkosi ..., umntu okucebisayo unokuba ngunjingalwazi, kwaye angathetha ngokusebenza kwakho njengomfundi.
Le yinto eqhelekileyo, kodwa sisicatshulwa apho wenza uhlobo lwesishwankathelo sayo yonke into oyiphawulileyo, kunye nesizathu sokuba ibhalwe le leta, ebonisa ukuba Umntu ocetyiswayo ngumsebenzi olungileyo, umntu olungileyo, okanye umntu onokumthemba.
Idatha kunye notyikityo
Ukulungiselela umntu ofumana ileta yengcebiso yokuqinisekisa idatha, licebo elilungileyo ukuba balapha, hayi kuphela utyikityo lomntu owenza ileta, kodwa kunye nedatha yabo yobuqu, ifom yoqhakamshelwano, idilesi yenkampani (okanye Idilesi), njl.
Uyicela njani ileta yengcebiso
Ngoku ukuba ucacile, lixesha lokuba ucele ileta yengcebiso, kodwa uyenza njani? Kule meko, kukho iindlela ezininzi:
Kwinkampani, kubalulekile ukuba ngumntu onesikhundla esiphakamileyo kunesakho kwaye okujongileyo, okanye usebenze phantsi kwezikhokelo zabo, kuba ngaloo ndlela baya kwazi ngakumbi ngawe ngendlela efanelekileyo. Kodwa ayikukhululi ekubaleni abantu osebenza nabo ileta yengcebiso ngokunjalo.
Ungaphuma njani ebomini bomsebenzi
ukuba Ileta yengcebiso yobuqu, ungayicela kumntu osebenza naye, umhlobo, isihlobo, okanye ummelwane. Yikholwe okanye ungakholelwa, la makhadi anokusebenza kakuhle kwaye aya kunceda omnye umntu ukuba afumane umbono wokuba unjani.
Ileta yengcebiso kufuneka icelwe kwangaphambili, kuba ngamanye amaxesha akukho lula ukuyibhala, kwaye kuthatha ixesha. Kwimeko yeenkampani, ezi zihlala zicelwa xa ubudlelwane bezengqesho buphela, ukuze zisebenze njengesihlomelo sokubonisa xa zikhangela omnye umsebenzi; kodwa oko akuthethi ukuba ayinakucelwa ngamanye amaxesha, nangona iyinto enqabileyo.
Imizekelo yeeleta zengcebiso
Okokugqibela, nantsi eminye imizekelo yeeleta zengcebiso zeentlobo ezahlukeneyo ezinokuthi zifike njengesikhokelo.
Kulowo ibhekisele kuye:
Ngale migca ndiyakwazisa ukuba [Igama elipheleleyo] ndisebenze kwinkampani / kwishishini / phantsi kwentlawulo yam kwiminyaka eyi-xxx. Ungumsebenzi ongenasiphako. Uzibonakalisile ukuba ubalasele [umsebenzi / urhwebo] kwaye ukhuthele, uzinikele, uxanduva kwaye uthembekile ekufezekiseni imisebenzi yakhe. Uhleli ebonisa inkxalabo yokuphucula, yokuqeqesha kunye nokuhlaziya ulwazi lwakhe.
Kule minyaka usebenze njenge: [ukubeka izikhundla]. Ke ngoko, ndiyathemba ukuba ungayijonga le ngcebiso kulo msebenzi uwunqwenelayo, kuba uyakuhlala uxanduva lwakho kunye nokuzibophelela.
Ngaphandle kwento enye ekubhekiswa kuyo, ndilinde le leta ukuba ithathelwe ingqalelo, ndiyishiya inombolo yam yoqhagamshelwano ngayo nayiphi na ingcaciso enomdla.
[Igama, ifani kunye nesikhundla somntu okanye senkampani].
Ndibhala le leta yengcebiso ilandelayo ndixhasa (igama nefani yomntu ocetyiswayo), echongwa ngenombolo yoxwebhu lwesizwe (inombolo yesazisi).
Igama lam ndingu (Igama lomntu obhalayo) kwaye ndibhala ngokwam (Ubudlelwane obukudibanisa nomntu, nokuba bubuhlobo, usebenza nabo, abamelwane ...) we (igama lomntu ocetyiswayo) kwaye ikhaya langoku lihambelana nale dilesi ilandelayo: (idilesi eyaziwayo yokuhlala, isixeko okanye idolophu).
Ndingathanda ukuxela ukuba (igama) ngumntu osondeleyo, onobuntu kwaye onesisa onokuthenjwa. Ihlala ihambelana nazo zonke izibophelelo zayo zemali ngendlela enoxanduva.
Kubo bonke ubuhlobo bethu, bekukho amaxesha amaninzi apho siye saxhasana khona, kwaye (igama) belisoloko ligcina ixesha kwaye lingqongqo, ukongeza ekunikezeleni ngenkxaso nanini na ifuneka. Uyathobela kwaye uthembekile.
Ndishiya kuye nabani na onokuyidinga, eyam (iindlela zonxibelelwano, nokuba ngumnxeba okanye i-imeyile), ukwandisa ulwazi okanye ukuphendula nayiphi na imibuzo enokuthi ivele malunga noku.
(Umnxeba okanye i-imeyile)
(Igama nefani yalowo ubhalayo)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » Ileta yengcebiso